धरहराको टुप्पोमा राखियो गजुर
८ वैशाख, काठमाडौँ । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको धरहराको पुन: निर्माणपछि टुप्पोमा गजुर राखिएको छ । वैशाख ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने भएपछि धरहराको टुप्पोमा बुधबार गजुर राखिएको नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर राजुमान मानन्धरले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘ आज धरहराको टुप्पामा ३३० केजीको सुनको जलप लगाएको गजुर […]
सरकारले भन्यो-५४ वटा आईसीयू र पाँच वटा भेन्टिलेटर थपियो
२६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको संक्रमणलाई रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि अस्पताल संख्या ५०५ र शैय्या संख्या २० हजार ३६४ पुगेको जनाएको छ । गत वैशाख २४सम्म आईसीयू संख्या १ हजार ८१७ र भेन्टिलेटरको संख्या ७३६ रहेकोमा बढेर आईसीयू १ हजार ८७१ र भेन्टिलेटर ७४१ पुगेको सरकारले जनाएको छ । यसअनुसार […]
बेड पाइहालिन्छ कि !
२६ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख महिना । महाराजगञ्ज वरपर ज्याकारान्डाको फूल ढपक्कै फूलेको छ । लकडाउन गरिएकाले भौतिक वातावरण निकै शान्त छ । कोलाहल र धुलोधुवाँ प्राय कम छ । तर यहीबेला महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पताल परिसर भने निकै अशान्त छ, व्यग्र छ । बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण यहाँको कोरोना वार्ड र आईसीयू भरिएको […]
उदयपुरमा शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञा, विवाहको गाडीलाई पास नचाहिने
२३ वैशाख, काठमाडौं । उदयपुरमा शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञा लागु हुने भएको छ । वैशाख २४ गते राती १२ बजेदेखि वैशाख ३१ मध्‍यराति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेडाईले जानकारी दिए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कोरोनाको संक्रमण उदयपुर जिल्लामा दिनप्रतिदिन बढ्‍दै गएको छ। त्‍यसकारण वैशाख २४ गते शुक्रबार राति १२ […]
कोरोना संक्रमणबाट एकै दिनमा ५५ जनाको मृत्यु
२१ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख यता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर उकालो लागेको छ । मंगलबार अहिलेसम्मकै धेरै ५५ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार २७ र सोमबार ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३४१७ पुगेको छ […]
बन्द भयो आन्तरिक उडान, टिकटको पैसा कसरी फिर्ता गर्ने ?
२१ वैशाख, काठमाडौं । आजबाट आन्तरिक हवाई उडान बन्द भएको छ । यसले अग्रिम टिकट बुकिङ र यात्राको योजना बनाएका यात्रुको तालिका प्रभावित भएको छ । सरकारले २० वैशाख मध्यरातिबाट लागू हुने आन्तरिक हवाई उडान र २३ वैशाख रातिबाट लागू हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको हो । अन्तराष्ट्रियतर्फ भारतमा साताको दुई उडान भने निरन्तर […]
२१ वैशाख, काठमाडौं । न्याय परिषद सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निधन भएको छ । उनको मंगलबार काठमाडौंको बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । कोरोना संक्रमणपछि वैशाख १० गते अस्पताल भर्ना भएका उनमा उच्च रक्तचाप र मधुमेहको पनि समस्या देखिएको थियो । काठमाडौंको मित्रपार्क निवासी निराला पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत हुन् । उनलाई मन्त्रिपरिषदको […]
बन्द भएको १०० वर्ष पुरानो घडी भूकम्पको धक्कापछि चल्न थाल्यो
१२ वैशाख, काठमाडौं । भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले जापान विश्वमै सर्वाधिक खतरनाक देश हो । यसको कारणचाहिँ जापान पृथ्वीको सबैभन्दा अशान्त टेक्टोनिक प्लेटमाथि पर्नु नै हो । अशान्त टेक्टोनिक प्लेटकै कारण जापान संसारमै सर्वाधिक भूकम्पको केन्द्रकै रुपमा रहेको छ । भूकम्पकै कारण जापानमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । जापानमा एक सय वर्ष पुरानो बन्द भएको […]
उठ्यो धरहरा, प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन (फोटो फिचर)
११ वैशाख, काठमाडौं । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको धरहरा पुनर्निर्माण भएको छ । भूकम्प गएको दिन वैशाख १२ को अघिल्लो दिन पारेर शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका छन् । धरहरा निर्माण हुनु सबै नेपालीका लागि खुसीको क्षण भएको भन्दै उनले घरघरमा साँझ दीपावली गर्न आव्हान गरे । ‘इतिहास झल्कने, आधुनिकता […]
सगरमाथा आधार शिविर पुगेका पर्वतारोहीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ?
१० वैशाख, काठमाडौं । ३ वैशाख २०७८ मा नर्वेका एक पर्वतारोही सगरमाथा आधार शिविरमा बिरामी परेपछि उनलाई उद्दार गरी काठमाडौं ल्याइयो । पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङका अनुसार उनमा कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको हो । काठमाडौं ल्याएर परीक्षण गरी विभागले सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीबाट उनको रिपोर्ट मगायो । ‘रिपोर्टमा ‘निमोनिया’ भएको उल्लेख […]
राजविराज विमानस्थलमा १५ दिन उडान रोकिने
९ वैशाख, काठमाडौं । सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा अवस्थित विमानस्थलमा काठमाडौंबाट हुँदै आएको हवाई उडान १५ दिनका लागि रोकिएको छ । विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नतीको काम सुरु भएका कारण १० वैशाख (शुक्रबार)देखि २५ वैशाखसम्म विमानस्थलमा हुँदै आएको उडान रोकिन लागेको हो । यहाँ बुद्ध एयरले नियमित उडान गर्दै आएको छ । कम्पनीले ट्राभल एलर्ट सार्वजनिक गर्दै १५ […]
फेरि उभियो धरहरा (फोटो फिचर)
५ वैशाख, काठमाडौं । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको पुरानो धरहराको ठुटोसँगै निर्माण गरिएको नयाँ ‘धरहरा’मा अहिले धमाधम काम चलिहरहेको छ । वैशाख ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने भएपछि श्रमिकहरुलाई काम भ्याई-नभ्याई भएको छ । नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर राजुमान मानन्धरका अनुसार प्लास्टर सकाउने, रंग लगाउने र बत्ती जोड्ने काम […]